Misy varavarana mivoha mandrakariva
“Fantatro ny asanao (indro, efa nasiako varavarana mivoha eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy), fa manana hery kely hianao ka nitandrina ny teniko ary tsy mba nandà ny anarako” Apôk. 3:8
Hasandratro eo anatrehan’Andriamanitra sy ireo Anjeliny izay maharesy. Nanome toky i Kristy fa hanaiky ny anaran’ireo eo anatrehan’Andriamanitra sy ireo Anjely any an-danitra. Nanome teny fikasana marobe antsika Izy mba hahatonga antsika ho anisan’ireo maharesy. Ilay Vavolombelona Marina dia nanome toky fa nanisy varavarana eo anoloantsika, izay tsy hain’olombelona hidina.
Mety maro amin’ireo tombontsoa eto an-tany no tsy azon’ireo izay maniry ny hitoetra ho mahatoky amin’Andriamanitra, mety ho feno fefy ny lalan’izy ireo ary hosakanan’ny fahavalon’ny fahamarinana ny asa ataony, saingy tsy misy mihitsy ny hery afaka hanakatona ny varavarana mampifandray ny fanahin’izy ireo amin’Andriamanitra. Ny kristianina ihany no mety hanakatona io varavarana io amin’ny fileferana amin’ny fahotana, na amin’ny fandavana ny fahazavana avy any ambony. Mety hiodina tsy hihaino ny hafatry ny fahamarinana izy, ary izay indrindra no hanapaka ny fifandraisan’ny fanahiny amin’Andriamanitra.
Mety ho manana sofina ianao, nefa tsy mahare. Mety ho manana maso ihany koa nefa tsy mahita ny fahazavana, na tsy mahazo ny fanazavana izay atolotr’Andriamanitra anao. Mety ho manakatona ny varavarana tsy hidiran’ny fahazavana ianao tahaka ireo Fariseo izay nanakatom-baravarana tsy hidiran’i Kristy rehefa nampianatra teo amin’izy ireo Izy. Tsy nandray ny fahazavana sy ny fahalalana nentiny izy ireo, satria tsy araka ny nirin’izy ireo ny fomba nahatongavan’izany. I Kristy no fahazavan’izao tontolo izao, ary raha nandray ny fahazavana izay nentiny tamim-pitiavana izy ireo, dia ho nandray ny famonjena, saingy nolaviny Ilay Masin’ny Isiraely.
Izao no nambaran’i Kristy mikasika azy ireo: “Ary izao no fanamelohana, fa tonga amin’izao tontolo izao ny mazava, nefa aleon’ny olona ny maizina toy izay ny mazava, satria ratsy ny asany. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, fandrao hita miharihary ny asany.” Jao. 3:19,20. Hoy koa Izy : “Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana” Jao. 5:40. Nisokatra ny lalana, saingy noho ny fomba fanaony dia nanakatom-baravarana izy ireo, ka nanapaka ny fifandraisany tamin’i Kristy. Mety ho manao toy izany koa isika rehefa mandà ny fahazavana sy ny fahamarinana.